उवासंघ–चितवनको अध्यक्षमा राजु श्रेष्ठ विजयी – Chitwan Post
भरतपुर । उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनको अध्यक्षमा राजु श्रेष्ठ भारी मतका साथ विजयी भएका छन् । श्रेष्ठले अध्यक्ष पदका अर्का उमेदवार ज्ञानेन्द्रमान शाक्यलाई ७८७ मतान्तरले पराजित गरेका हुन् ।
संघको २०७६/०७८ कार्यकालका लागि मंगलबार भएको मतदानमा श्रेष्ठले एक हजार ९८० मत ल्याउँदा शाक्यले जम्मा एक हजार १९३ मत प्राप्त गरे । तीन हजार ७८२ मतदाता रहेको संघमा तीन हजार १७३ जनाले मतदान गरेका थिए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शाक्य प्यानलका चुननारायण श्रेष्ठ यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् । तीन जना उपाध्यक्षमध्ये शाक्य प्यानलबाट ई. भोजराज कौडाल र सुमनकुमार श्रेष्ठ तथा श्रेष्ठ प्यानलबाट चिरञ्जीवी सुवेदी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
सदस्य पदमा विजयी हुनेमा वाणिज्यतर्फ ज्ञानुप्रसाद न्यौपाने (२५१२), थिरप्रसाद धिताल (२४९०), चेतनारायण सापकोटा (२१३६), विकास थापा (१८५०), बद्री पौडेल (१८०४), लक्ष्मी रिमाल पौडेल (१८७२) रहेका छन् । त्यस्तै वाणिज्यमा श्रेष्ठ प्यानलबाट सापकोटा, धिताल, थापा र न्यौपाने निर्वाचित भए भने शाक्य प्यानलबाट बद्री पौडेल र लक्ष्मी रिमाल पौडेलमात्रै निर्वाचित भए ।
शाक्य प्यानलबाट उमेदवार बनेका आनन्द रावत (१३०२) र राजेन्द्र सिग्देल (१३७८) पराजित भए भने श्रेष्ठ प्यानलबाट उमेदवार बनेका शिवप्रसाद ओझा (१७२८) र पाण्डव ढकाल (१७७४) मत ल्याएर पराजित भए ।
सदस्यहरुमा उद्योगतर्फ अशोक अधिकारी (३०३३), ई. कृष्णप्रसाद रिजाल (३०१३), विनोद पौडेल (२९५०), भानुभक्त न्यौपाने (२४००), योगिता पिया (२८०९), लीलबहादुर क्षेत्री (२५२१) मतसहित निर्वाचित भएका छन् । उद्योगमा श्रेष्ठ प्यानलका एकमात्र उमेदवार भानुभक्त न्यौपाने निर्वाचित भए । शाक्य प्यानलका सोमप्रसाद काप्री (२१२०) मत ल्याएर पराजित भए ।
संघको वस्तुगत संगठित सदस्यतर्फ शाक्य प्यानलबाट दुर्गादत्त कँडेल (२६), विनोद तिमल्सिना (२१), धनप्रसाद पोख्रेल (२८) र शर्मिला न्यौपाने (२०) निर्वाचित भएका छन् । श्रेष्ठ प्यानलबाट न्यौपाने निर्वाचित भइन् भने अरु तीन जना शाक्य प्यानलबाट निर्वाचित भए । मंगलबार अध्यक्षसहित १८ पदका लागि २७ जनाबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
महिला सदस्यमा श्रेष्ठ प्यानलकी रजनी मास्के (१९९७) निर्वाचित भइन् । मास्केले आफ्नो प्रतिस्पर्धी विमला अधिकारी (११४४) लाई पराजित गरेकी हुन् । सदस्य कर्पाेरेटतर्फ शाक्य प्यानलका राजेन्द्र वली र शिरिष पन्त तथा सदस्य क्षेत्रीयतर्फ इच्छाकामना गाउँपालिका इकाइका मुक्तिकुमार श्रेष्ठ पनि यसअघि नै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।
उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले सोमबार ५३औँ वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको उद्घाटन गरेका थिए ।